UDube ufuna ukubuyisa abashayisibhakela abafuduka eKZN
Ezesibhakela Isibhakela: EPA
Zakhele Xaba | November 4, 2020
IMENENJA yesibhakela entsha yaKwaZulu-Natal, uMike Dube, ifuna zidle ekhaya kubashayisibhakela baseKZN abagcina befuduka ngenxa yokufuna amadlelo aluhlaza.
UDube uqokwe yiBoxing South Africa (BSA) ukwengamela isibhakela eKZN ekuqaleni kwesonto. Uvale isikhala esivuleke emuva kokushona kukaFrancis Manning ezinyangeni ezedlule.
Enye yezinselelo ebhekene noDube wukukhwezela isibhakela esidonsa kanzima eKZN okuholela ekutheni abashayisibhakela behlale isikhathi eside bengalwi. Abanye bagcina besiyekile isibhakela, abanye balibangise kwezinye izifundazwe.
Kubashayisibhakela abanohlonze abafulathele iKZN kukhona umpetha we-IBF uMoruti “Babyface” Mthalane, Thabiso “The Rock” Mchunu asebeqhathwa eGauteng noNkululeko “Bulldog” Mhlongo waseShowe oqhathwa eFree State.
“Abafana abahambi eKZN ngoba beyizonda. ITheku linemali futhi lithathwa njengesizinda sezemidlalo e-Afrika. Kufanele laba bashayisibhakela balwe lapha.
“UMchunu, uMthalane noMhlongo bahambe lapha ngoba bephoqwa wukweseleka kwemali. Kufanele isifundazwe sikwazi ukubanakekela.
“Sizobabuyisa ngokuthi sithole abaxhasi nabalandeli babuye esibhakeleni. Abalandeli sizobabuyisa ngokuthi siqhathe izimpi ezifunwa ngabantu,” kusho uDube.
Uthe enye yezinto eziseqhulwini ahlose ukuzenza wukuhlela ukuqeqeshwa kwezimenenja nophromotha.
“Kufanele umuntu akuqonde ukuthi kuyini ukuba yimenenja yebhokisa. Emasontweni ezayo iBSA izosibiza nokuyilapho ngizofika ngikwendlale kuyo lokhu engikufisayo,” kusho uDube.
“Ophromotha nabo kufanele baqeqeshwe emkhakheni webhizinisi ukuze bakuqonde okudingeka kubo uma beyofuna abaxhasi. Lokhu kubalulekile ukuze bazi ulimi olukhulunywa kulelo zinga. Umsebenzi kufanele uqale wokubuyisa isibhakela kulesi sifundazwe.”
UDube uqokwe noMzoli Tempi ozongena endaweni kaMickey Klass kwesobumenenja eWestern Cape.
Esitatimendeni esikhishwe yiBSA, ithe inethemba lokuthi bobabili bazoyibamba kahle ezikhundleni zabo njengoba le nhlangano isembhidlangweni wokubuyisela isibhakela saseNingizimu Afrika ezingeni eliphezulu.
Khonamanjalo, namuhla abezinhlaka ezehlukene esibhakeleni bahlele ukhukhulelangoqo wemashi ebheke kwa-SABC e-Auckland Park, eGauteng. Bakhononda ngokungavezwa kuthelevishini kwezimpi zesibhakela abakubona kubulala umdlalo.